Indlela ukukhetha jacket lamadoda esitolo inthanethi?
ukhona lapha: Ikhaya amathiphu Indlela ukukhetha jacket lamadoda esitolo inthanethi?
Uhlezi Ideal emalini, jacket amadoda stylish sika - ingxenye ukumodeliswa umfanekiso indoda, okubonisa besitayela sakhe, isimo senhlalo, kanye izinga lempumelelo amadoda. Lapho uthenga into yokugqoka kubalulekile ukuhlola ngokuhlolisisa izici zayo ezinkulu - umugqa ngalé, kokufika emalini, izinga impahla kanye ngezinga elithile e bafake.
Thenga ibhantshi esitolo ne kufaneleka, sazise ukubonakaliswa kwayo egumbini sigqoka esibukweni, lula. Nokho, ukushuba isigqi wokuphila kanye nokuntuleka njalo isikhathi, indoda yesimanje, kaningi iholela isidingo amadoda ukuthenga ijakhethi esitolo inthanethi, lapho ithuba uzame futhi ukuhlola umkhiqizo akuyona.
Online esitolo jackets
Indlela ukukhetha ibhantshi ezitolo?
Nge ukuma ejwayelekile, ezifanele etafuleni zokulawula ntathu, ukuthenga ijakhethi esitolo online kulula. Kodwa uma ukhokha eziningi ukunakekela ukuqeqeshwa emakamelweni imfanelo noma ukuthambekela isisindo okweqile, kanye nemingcele zehluke sibalo standard ekukhuleni, sonke, noma proportionality, Ukukhethwa jacket nzima hhayi aphanjaniswe nge imodeli akhethiwe, udinga kahle ukuhlola yonke imininingwane umkhiqizo kanye ulwazi mayelana nalo.
Indlela ukukhetha inthanethi esitolo jacket:
Uyelulekwa ukuqala ukukhetha imikhiqizo ukuhlunga. Ecacisa oyifunayo osesho, ungakwazi khulula ngokwakho kusuka ekubukeni ayenzi i isikhundla sakho kwezinhloso zenzuzo, bagxile mikhiqizo, ukuthi ngeke ukuhlangabezana nezidingo zakho;
khetha ozithandayo imodeli nombala yakho jacket, ukufunda ukuze Imebhe imikhiqizo ntathu anezikhala, lapho kwakubonakala imikhiqizo eziyisisekelo idatha (usayizi / ukukhula);
funda ngokucophelela izithombe jacket, ivoti, njengoba angase ahlale phezu udoli noma imodeli.
Yenza i-oda kuphela emva, niyokholwa kanjani, ukuthi yonke nemingcele futhi ikhwalithi yemikhicito ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Lokho kungase ukukukhuthaza ukuba ukuthenga zokuphepha
Ukuze ukuthenga kwakho inthanethi kwase kuphephile, ukuthenga kuphela ibhantshi endaweni ephephile esitolo inthanethi, lapho umdayisi ezisekelwe kunembeza eqala Umthengi uqinisekisa kwamalungelo abo futhi inikeza lemali ulwazi umkhiqizo.
Kanjani ukuze uqinisekise ubuqotho umdayisi? Ngokuphelele ukufunda isayithi esitolo. Umdayisi abazihluphayo ubeka izimpahla ikhadi umthengi:
okungenani ezinhlanu umkhiqizo izithombe engele ezahlukene - kuthule kuthé cwaka nge izikhundla ezintathu (phambi, singatsheki, kusukela emuva), zinhlobo sendleleni, buttoned futhi ifomu unbuttoned, sithombe sibonisa ingaphakathi jacket;
izithombe ezengeziwe, okubonisa lokufikela ebhantshini lakhe endaweni Sock yangempela, kanye nezithombe nge izesekeli, ukuze bakwazi ngeso lengqondo umfanekiso Ngokuzayo;
ithuthukisa isithombe isampula izicubu, kusuka okuyinto jacket ithungwe, ukuze bakwazi ukuhlola ikhwalithi kanye ukuthungwa, umbala ukuphrinta Indwangu;
Ibonisa izithombe imifanekiso bukhoma, okwenza kube kungenzeka ngomqondo ovulekile ukuhlola, umkhiqizo libukeka empeleni.
Njengoba umdayisi ngenxa kanembeza iwebhusayithi esitolo libeka amakhasimende ngokweseka igridi ntathu, kusukela lapho ungathola ulwazi olwengeziwe mayelana nomkhiqizo, ngenhlonipho yobukhulu ngamunye:
jacket obuphelele kusuka phezulu esangweni emaphethelweni emabhilidini,
jacket ububanzi ehlombe,
Sleeves obuphelele kusukela armhole emaphethelweni engezansi.
Leli thebula kwenza kube nokwenzeka ukunquma ngokunembile nobukhulu obufanele jacket nangokunembile ukuthenga ke esitolo inthanethi.
Isibonelo esihle ukuthengisa ihlelwe kahle zokugqoka amadoda ngokusebenzisa izinsiza inthanethi, Kubonisa isayithi «SVYATNYH» - inkampani, okuyinto namuhla ingenye abakhiqizi best of izingubo for amadoda, kuhlanganise izingubo for abafana. Ngo esitolo online inkampani ukuze amakhastama akuthokozele ukuba ukudala Logistics elula, ngokuhlunga, ukhetha futhi ukubuka umkhiqizo. nto ngasinye siqukethe i iphothifoliyo olubanzi, obonisa hhayi kuphela umkhiqizo uqobo, kodwa lezimpahla nomkhiqizi amalebula, okuyinto wabonisa idatha yayo ntathu.
Indlela ukukhetha qapha?
Yikuphi okungcono ukuthenga kumatilasi inflatable
amazinyo. Indlela ukukhetha kwesokudla yamazinyo